XOG:- Wafdi uu hoggaaminaayo madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan dalka Itoobiya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Wafdi uu hoggaaminaayo madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan dalka Itoobiya
Waxaa maanta la filayaa in wafdi uu hoggaaminaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ay u amba-baxaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya.
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ayaa inoo sheegaya in safarka madaxweyne Farmaajo ee magaalada Addis Ababa uu ka dambeeyay kadib markii uu marti-qaad ka helay ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn.
Safarka madaxweyne Farmaajo ee magaalada Addis Ababa ayaa kusoo beegmaya kahor inta aanu dhicin shirka dhawaan ka furmaya magaalada London ee looga hadli doonno arrimaha Soomaaliya, wuxuuna safarkiisan ee Itoobiya noqonaya mid taariikhi ah uu ku tago dalkaas.
Madaxweyne Farmaajo ayaa markii uu gaaro magaalada Addis Ababa waxa uu halkaasi kulamo kula qaadan doonnaa ra’iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Hailemariam Desalegn, kuwaas oo kawada hadli doonna xaaladda Soomaaliya, doorka Itoobiya ay ku leedahay Soomaaliya iyo shirka London ka furman doonno.
Dowladda Itoobiya ayaa ka mid ah dowladaha ay ciidamadooda kaga sugan yihiin dalka Soomaaliya, iyadoona sidoo kale Itoobiya ay tahay dowlad saaxiibo la ah maamul goboleedyada ka jira dalka.
Maalintii Axadda ayay ahayd markii madaxweyne Farmaajo uu waraaqadaha safiirnimo ka guddoomay safiirka cusub oo ay Itoobiya usoo magacawday Soomaaliya.
Tan iyo markii xilka madaxweynaha Soomaaliya loo doortay Maxamed C/laahi Farmaajo waxaa aad mugdi sii galaayay xiriirka u dhaxeeya dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya, waxaana haatan lagu wadaa in labada dhinac ay heshiisyo kama dambeys ah gaaraan, iyadoona Itoobiya ay ka mid tahay dalalka saameynta weyn ku leh xaaladda dalka Soomaaliya.
Safarka madaxweyne Farmaajo uu ku taggi doonno dalka Itoobiya ayaa noqonaya kii ugu horeeyay uu ku tago dalkaasi, tan iyo markii xilka loo doortay, waana safarkii labaad uu safar ku tago dalalka deriska la ah Soomaaliya.